टेनेसी WIC | JPMA, Inc.
हामी तपाइँ र तपाइँको परिवारलाई टेनेसी WIC कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं। कृपया तपाईंको स्थानीय WIC क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन्। तपाईंको स्थानीय WIC क्लिनिक "को प्रयोग गरेर फेला पार्नुहोस्WIC क्लिनिक फेला पार्नुहोस्"विकल्प तल।
के तपाइँसँग प्रश्नहरू छन् वा प्रयोग गर्दा समस्याहरू छन् WICShopper अनुप्रयोग? ईमेल JPMA मा [ईमेल सुरक्षित]
TNWIC कार्ड यहाँ छ!
TNWIC कार्ड अब सबै coun coun काउन्टीमा उपलब्ध छ!
टेनेसी डब्ल्यूआईसी कार्यक्रम एक कागज आधारित लाभ जारी गर्न को एक इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तान्तरण (EBT) प्रणाली को लागी सारिएको छ। कागज फूड इन्स्ट्रुमेन्टहरू (वाउचर) जारी गर्नुको सट्टा, डब्ल्यूआईसी फूड बेनिफिटहरू इलेक्ट्रोनिक बेनिफिट खातामा जारी हुन्छन्।
परिवारहरूले आफ्नो WN अनुमोदित खाना किन्नको लागि WN आधिकारिक किराना स्टोरहरूमा फार्मसीहरू चयन गर्न TNWIC कार्ड र पिन प्रयोग गर्दछन्।
के मेरो सबै WIC खाद्य पदार्थहरू पाउनु पर्छ?
A: होईन, तपाईंले एक शपिंग यात्राको क्रममा सबै WIC खाद्य पदार्थ खरीद गर्नु पर्दैन। तपाइँ तपाइँको लाभ महिना भर मा बहु खरीदहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कि तपाइँको लाभ कहिले सुरू हुन्छ र अन्त्य हुन्छ, तपाइँको स्थानीय WIC क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
Q: के म अर्को खाद्यान्नको साथ प्रयोग नगर्ने फूडहरू बदल्न सक्छु?
A: केहि विकल्पहरूको लागि केहि खानाको लागि अनुमति छ। तपाईको स्थानीय WIC क्लिनिकलाई तपाईका विकल्पहरू छलफल गर्नका लागि र तपाइँको खाना बेनिफिटहरू परिवर्तन गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। स्टोरमा कुनै प्रतिस्थापन गर्न सकिदैन।
प्रश्न: यदि मैले स्तनपान घटाउने वा रोक्ने हो भने मैले के गर्नुपर्छ?
A: तपाईंको स्थानीय WIC क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईं एक न्यूट्रिशनिस्टसँग भेट्नुहुनेछ र तपाईंलाई उपलब्ध विकल्पहरूको बारेमा छलफल गर्नुहुनेछ।
Q: के मेरा लाभहरू अर्को महिनामा रोल हुन्छन् यदि तिनीहरू प्रयोग गरिएन भने?
A: होईन। कुनै WIC खाद्य सुविधाहरू त्यो महिना खरिद गरिएको छैन अर्को महिनामा ल्याउँदैन।
Q: के सबै WIC सहभागीहरूले WICSHOPPER अनुप्रयोगमा WIC नियुक्तिहरूको सूचना प्राप्त गर्नेछन्?
A: होइन, तपाइँको स्थानीय WIC क्लिनिक सोध्नुहोस् यदि तपाइँको भेट WICSHOPPER अनुप्रयोग मा देखापर्नेछ।
प्रश्न: के फोटोहरू शेल्फमा उत्पादनहरूको सही प्रतिनिधित्व छ?
A: होईन, खाद्य उत्पाद तस्विरहरू समान उदाहरणहरू हुन् र स्टोर शेल्फमा उस्तै वास्तविक उत्पाद नहुन सक्छ।
Q: मैले नयाँ WIC कार्ड र सुविधाहरू आज प्राप्त गरें। म यसलाई कहिले WICShopper अनुप्रयोगमा दर्ता गर्न सक्षम हुनेछु?
A: तपाईंको कार्डले WICShopper अनुप्रयोगमा लोड गर्न २ 24 घण्टा लिन सक्दछ जब एकपटक सुविधाहरू तोकिन्छन्।
Q: मसँग TN WIC कार्ड छ तर WIC सुविधाहरू छैन। म कहिले WICShopper अनुप्रयोगमा मेरो कार्ड दर्ता गर्न सक्छु?
A: WICShopper अनुप्रयोगमा तपाईंको कार्ड दर्ता गर्न तपाईंसँग हालको WIC सुविधाहरू हुनुपर्दछ। WIC सुविधाहरू प्राप्त गर्न कृपया WIC अपोइन्टमेन्टको लागि कृपया तपाईंको स्थानीय WIC क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
Q: मैले मेरा किर्य स्टोरमा आज मेरो WIC कार्ड प्रयोग गरें। किन मेरो लाभ ब्यालेन्स WICShopper अनुप्रयोगमा अपडेट हुन सकेन?
A: तपाईंको हालको लाभ ब्यालेन्स WICShopper अनुप्रयोगमा हेर्नको लागि 48 घण्टा लाग्न सक्छ।
Q: म मेरो WICShopper अनुप्रयोगमा एक भन्दा बढी कार्ड थप्न सक्छु?
A: हो, यदि तपाईंसँग अर्को सक्रिय TN WIC कार्ड छ भने, तपाईं यसलाई तपाईंको WICSHOPPER अनुप्रयोगमा थप्न सक्नुहुनेछ।
प्रश्न: के म लाभ उठाउने चेतावनीहरूको लागि मिति र समय परिवर्तन गर्न सक्छु?
हो: हो। सेटिंग्समा जानुहोस्> तल स्क्रोल गर्नुहोस् तपाईंको भाषा छनौट गर्नुहोस्> म्याद समाप्ति सूचनाहरू> बचत सेटिंग्स
प्रश्न: के म सूचनाहरूको लागि मिति र समय परिवर्तन गर्न सक्छु?
हो: हो। सेटिंग्समा जानुहोस्> तल स्क्रोल गर्नुहोस् तपाईंको भाषा छनौट गर्नुहोस्> नियुक्ति सूचनाहरू> बचत सेटिंग्स
Q: म मेरो WICShopper अनुप्रयोग को लागी भाषा परिवर्तन गर्न सक्दछु?
हो: हो। होम> मेनू> सेटिंग्स> तपाईंको भाषा छनौट गर्नुहोस्> सेटिंग्स बचत गर्नुहोस्
प्रश्न: मैले कसरी स्क्यान गरेको खाना मेरो लाभ योजनामा ​​छ भने कसरी जान्ने?
A: एक उत्पादन स्क्यान पछि, एक अनुमोदित खाद्य वस्तु हरियो सीमानाको साथ देखा पर्नेछ।
प्रश्न: म कसरी प्रश्नहरू सोध्छु वा मेरो WICSHOPPER अनुभवमा प्रतिक्रिया दिन सक्छु?
A: गृहमा जानुहोस्> सहयोग प्राप्त गर्नुहोस् वा गृह> मूल्या Rate्कन गर्नुहोस् वा प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Q: के तपाईं WICSHOPPER अनुप्रयोगको माध्यमबाट faschealth.org मा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ?
उत्तर: हो, तपाईं ड्यासबोर्डबाट vihealth.org पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि तपाईंले faschealth.org मा लगईन गर्नुभयो भने, तपाईंले WICSHOPPER अनुप्रयोग छोड्नुहुनेछ।
Q: म कसरी खरीद गर्न को लागी अनुमोदित उत्पादनहरु को एक प्रतिलिपि पाउन?
A: गृह> WIC लाई अनुमति मिल्ने फूडहरू
प्रश्न: म कसरी मेरो क्षेत्रमा WIC स्वीकृत स्टोरहरू फेला पार्न सक्छु?
A: गृह> WIC स्टोरहरू
Q: म कसरी मेरो हालको स्थान मा नजिकको क्लिनिक पाउन?
A: Home> WIC क्लिनिक खोज्नुहोस्
Q: मैले हप्ता पहिले मेरो TN WIC कार्ड प्राप्त गरें तर मेरो नियुक्ति पूरा भयो र आज लाभहरू प्राप्त गरें। मैले अनुप्रयोगमा मेरा फाइदाहरू कहिले देख्ने छु?
A: तपाईंको हालको लाभ ब्यालेन्स WICShopper अनुप्रयोगमा हेर्नको लागि 24 घण्टा लाग्न सक्छ।
मेरा फाइदाहरू जाँच गर्दै
WICShopper अनुप्रयोगले तपाइँलाई तपाइँको WIC बेनिफिटहरूको ट्र्याक राख्न र रेजिष्टरमा तपाइँलाई कुनै समस्या हुने छैन भनेर निश्चित गर्न तपाइँको बाँकी सुविधाहरूको बिरूद्ध उत्पादनहरू स्क्यान गर्न अनुमति दिनेछ। यदि तपाईंले अझै आफ्नो TNWIC कार्ड दर्ता गर्नुभएको छैन भने सुरू गर्नका लागि 'मेरा लाभहरू' बटन ट्याप गर्नुहोस्!
महत्वपूर्ण नोट: तपाईंले देख्नु भएको लाभहरू hours 48 घण्टा ढिलाइ हुन्छ। तपाईंको सुविधाहरू पर्दाको शीर्षमा जाँच गर्न नबिर्सिनुहोला कि लाभहरू WICShopper मा कहिले अपलोड गरियो। दिमागमा राख्नुहोस् कि त्यसपछिको शपिंग यात्राहरू तपाइँको लाभ रकममा प्रतिबिम्बित हुँदैनन्!
तपाईंको बेनिफिटहरू जाँच गर्दै
तपाइँको कार्ड दर्ता गरेपछि, तपाइँ "मेरा लाभहरू" बटन ट्याप गरेर तपाइँको बाँकी सुविधाहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ। उत्पादनहरू स्क्यान गर्दा, अनुप्रयोगले तपाईंलाई भन्नेछ कि यदि उत्पाद WIC योग्य छ र यदि तपाईंसँग उत्पादन खरीद गर्न को लागी फाइदाहरू छन्। पहिले, मुख्य स्क्रिनको माथिल्लो दाहिने कुनामा नयाँ "मेरा लाभहरू" बटन ट्याप गर्नुहोस्।
यस स्क्रिनबाट तपाईको बेनिफिटहरूमा कोटी ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ उत्पादनहरू हेर्न र खोज्न तपाईले खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस कोटीका उत्पादनहरूका लागि व्यञ्जनहरू हेर्न वा क्यालकुलेटरहरू प्रयोग गर्न तपाईंलाई त्यस कोटीमा अधिकतम खरीदहरू गर्न मद्दत गर्न।
प्रयोग गर्नुहोस् "WIC क्लिनिक फेला पार्नुहोस्WICShopper अनुप्रयोगमा बटन। तपाईं आफ्नो क्लिनिकमा निर्देशनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई अनुप्रयोगबाट कल गर्नुहोस्।
प्रयोग गर्नुहोस् "WIC पसलहरूWICShopper अनुप्रयोगमा बटन।
तपाईंको WIC स्थानीय क्लिनिकबाट उपलब्ध शपिंग सूची समीक्षा गर्नुहोस् (पनि उपलब्ध छ यहाँ) र तपाइँका बाँकी लाभहरू WICShopper मा 'मेरो बेनिफिटहरू' बटन प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्।
बेभ्यालि ब्यालेन्सले eWIC कार्डमा उपलब्ध सबै घरेलु खाना बेनिफिटहरूको पहिचान गर्दछ।
स्वीकृत WIC फुटकर बिक्रीमा मात्र खरीद गर्नुहोस् जुन डसेलसँग पहिचान हुन्छ।
क्यासियरलाई भन्नुहोस् तपाईले eWIC कार्ड प्रयोग गरिरहनु भएको छ आइटम स्क्यान हुनु भन्दा पहिले।
क्यासियरलाई सूचित गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग प्रयोग गर्न चाहानु हुने कुपनहरू छन् भने।
क्यासियरले तपाईंलाई तपाइँको eWIC कार्ड सम्मिलित गर्न, तपाइँको चार अ digit्कको पिन प्रविष्ट गर्न, र कीप्याडमा प्रविष्ट बटन थिच्न सोध्नेछ।
* केवल invalid अवैध प्रयासहरूलाई अनुमति छ। सहभागीले या त अर्को दिन सम्म प्रतिक्षा गर्न सक्छ प्रणाली स्वचालित रूपमा रिसेट गर्न को लागी लेनदेन गर्न को लागी वा तिनीहरूले कन्ड्युन्टको ग्राहक सेवामा सम्पर्क गर्न सक्दछ (844) 545-8405 यदि उनीहरूलाई आफ्नो लेनदेन पूरा गर्न तत्काल सहयोग चाहिन्छ भने।
WIC- अनुमोदित खाद्य वस्तुहरू eWIC कार्डबाट कटौती गरिनेछ।
रसीद जाँच गर्नुहोस् आइटमहरू सही काटिएको छ भनि सुनिश्चित गर्न र तपाईंको खरीद पुष्टि गर्न कुञ्जी थिच्नुहोस्।
यदि तपाइँ गैर- WIC आईटमहरू खरीद गर्नुहुन्छ भने, क्यासियरले तपाइँलाई सोधिनेछ कि तपाइँ कसरी ती आईटमहरूको लागि तिर्न चाहनुहुन्छ।
जब WIC लेनदेन पूरा हुन्छ, तपाईंलाई स्लाइड गर्न प्रेरित गरिनेछ तपाईंको कार्ड र एक टोन वा बिप आवाज हुनेछ।
क्यासियरले तपाईंलाई हालको महिनाको लागि बाँकी रहेको शेष रसीद दिनेछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग तपाईंको eWIC कार्ड र रसिद छ जब तपाईं स्टोर छाड्नुहुन्छ।
प्रयोग नगरिएका लाभहरू अर्को महिनामा लिन सक्दैन।
Q: मैले केहि खाद्यान्न स्क्यान गरेको वा एक UPC नम्बर प्रविष्ट गरें र केहि फरक सन्देशहरू देखें। त्यसको मतलब के हो?
A: सन्देशहरू हुन्:
अनुमति - यो वस्तु WIC योग्य छ! एउटा कुरा थाहा पाउनु हो कि तपाईले कुनै वस्तुलाई अनुमति दिईएको हुनसक्दछ, तर यो तपाईंको WIC फूड बेनिफिटको अंश होइन, त्यसैले तपाईं यसलाई WIC सँग खरीद गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरणको लागि, पूर्ण स्तनपान गराउने आमाले क्यान्ड माछा पाउँछिन्। यदि पूर्ण रूपमा स्तनपान गराउने महिला तपाईको परिवारमा छैन भने क्यान्ड माछा तपाईको WIC खाना बेनिफिटको हिस्सा हुँदैन, र तपाई रेजिस्टरमा क्यान्ड माछा किन्न सक्नुहुन्न।
पर्याप्त फाइदाहरू छैनन् - तपाईंलाई यी सुविधाहरू तोकिइएको थियो, यद्यपि तपाईंसँग स्क्यान गरिएको उत्पादन खरीद गर्नको लागि यस श्रेणीमा पर्याप्त बाँकी छैन।
कुनै योग्य बेनिफिटहरू - यसको मतलव तपाईले WIC योग्य उत्पादन स्क्यान गर्नुभयो, तर यो तपाईको WIC खाना बेनिफिटको अंश होईन, त्यसैले तपाईले WIC सँग किन्न सक्नुहुन्न। उदाहरणको लागि, एक बर्षको बच्चा पूरै दुध पाउँछ। यदि तपाईंसँग तपाईंको परिवारमा एक बर्षेको बच्चा छैन भने, सम्पूर्ण दूध तपाईंको WIC फूड बेनिफिटहरूको अंश हुनेछैन, र तपाईं रजिस्टरमा सम्पूर्ण दूध किन्न सक्षम हुनुहुने छैन।
WIC वस्तु होइन - यसको मतलब WIC ले यस वस्तुलाई अनुमोदन गरेको छैन। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ WIC खाद्य सुविधाहरूसँग यो खाना किन्न सक्षम हुनुपर्दछ, हामीलाई "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"यो अनुप्रयोगमा बटन।
A: अनुप्रयोगले ताजा फलफूल र तरकारीहरूमा केहि बारकोडहरू स्क्यान गर्न सक्दैन वा कहिलेकाँही स्टोरहरूले तिनीहरूको प्याकेजिंग प्रयोग गर्दछ।
Q: जब म प्रयोग गर्दछु, "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"? र के यो छ?
A: "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"तपाईले WIC लाई बताउनुहुन्छ जब एक खाद्यवस्तु किन्न तपाईं खरीद गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ रेजिस्टरमा अस्वीकार गरिएको छ। जब तपाइँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, "मैले यो खरीद गर्न सकेन!"WICShopper अनुप्रयोगमा, WIC राज्य एजेन्सी एक सूचना प्राप्त गर्दछ। WIC राज्य एजेन्सी सबमिट गरिएका सबै आईटमहरूको समीक्षा गर्नेछ र स्टोरहरूको साथ काम गर्दछ तपाईंको लागि खाद्य पदार्थहरू उपलब्ध बनाउँदछ!
टेनेसी WIC शपिंग गाइड
टेनेसी WIC Guía de Compras
دليل التسوق WIC بولاية ٽينيسي
अस्वीकरण र Nondiscrimission
टेनेसी स्वास्थ्य विभागको वेबसाइटमा समावेश सबै जानकारीहरू शैक्षिक उद्देश्यहरूको लागि मात्र हो र निदान वा उपचारको लागि प्रयोग गरिनु हुँदैन। जानकारी डब्ल्यूआईसी पोषण र सम्बन्धित मामिलाहरु को समझ को लागी प्रदान गरीन्छ। उपभोक्ताहरूले मेडिकल सल्लाहलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन वा खोज्नमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन किनभने तिनीहरूले यो साइटमा देखेका हुन सक्छन्। पोषण विशेषज्ञ, चिकित्सक, र अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरू अन्य स्रोतहरू परामर्श र यस साइटमा निहित जानकारी पुष्टि गर्न प्रोत्साहित छन्। कुनै पनि गैर-सरकारी इकाई, उत्पादन, सेवा, वा जानकारीको स्रोत जुन यस साइटमा समावेश हुन सक्दछ, टेनेसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिधा वा निहित, या त अनुमोदन मानिदैन। थप रूपमा, विभागलाई अन्य साइटहरूमा समावेश गरिएको जानकारीको लागि जिम्मेवार मान्न सकिदैन जससँग यसको वेबसाइट लि linked्क हुन सक्छ।
भेदभावको एक प्रोग्राम उजुरी दायर गर्न, पूरा गर्नुहोस् USDA कार्यक्रम भेदभाव उजूरी फारम, (AD-3027) मा अनलाइन फेला पर्यो: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, र कुनै पनि यूएसडीए अफिसमा, वा यूएसडीएलाई सम्बोधन गरिएको चिठी लेख्नुहोस् र पत्रमा अनुरोध गरिएको सबै जानकारीहरू फारममा दिनुहोस्। उजूरी फारमको प्रतिलिपि अनुरोध गर्न, कल गर्नुहोस् (866) 632-9992। तपाईंको पूरा फारम वा पत्र यूएसडीएलाई बुझाउनुहोस्:
मेल: अमेरिकी कृषि विभाग
फ्याक्स: (202) 690-7442; वा
इमेल: [ईमेल सुरक्षित].
एफएनएन को लागि न्यूस्ट्रिक्रिक एसिस्टेंस को रूप मा उपलब्ध गराईएको छ, यस तरिका को उपयोग गर्दछ र स्थानीयहरु लाई, र अधिक लाभकारीहरु को उपयोग गर्न को लागी, कुनै पनि सार्वजनिक वितरण को बारे मा कुनै डिस्काउंटेशन:
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema braille, letras grandes, cintas de Audio, lenguaje de señas american, आदि), deben ponerse en contactto la lancia स्थानीय ) en la que solicitaron लॉस लाभार्थीहरू। लास पर्सनस सोरडास, कन्फिक्टेड डे डे अडीसीन ओ डिसपासिडेड्स डेल हब्ला प्यूडेन कम्यूनिकार्से कॉन एल यूएसडीए पोर मेडिओ डेल फेडरल रिले सेवा [सर्वरिसियो फेडरल डी रट्रान्समिसन] अल (एक्सएनयूएमएक्स) एक्सएनयूएमएक्स-एक्सएनयूएमएक्स। एडेम्स, ला इन्फोर्मेसन डेल प्रोग्रामा सेप्टे प्रोपोसरियन एन ओट्रोज इडिओमास।
हाम्रो उपस्थिति को भेदभाव को रूप मा, पूर्ण रूप देखि USDA डिस्काउंट प्रोग्राम को USDA, (AD-3027) को रूप मा स्पष्ट हो र निम्नलिखित मा हो: http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf। y en cualquier oficina del USDA, o bien escribaacartoons de USDAeincluya en la carta to inform you। यस कम्पैक्ट डिस्क देखि नमूना पटरिहरु, llame अल (866) 632-9992। यस कम्पैक्ट डिस्क देखि नमूना पटरिहरु:
करेको: अमेरिकाको कृषि विभाग
फ्याक्स: (202) 690-7442;